Izinqolobane Zokudla - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Posted on September 24, 2020 by UCarey Gillam
Abameli bomnikazi weMonsanto uBayer AG kanye nabamangali abamangalela uMonsanto batshele ijaji lombuso ngoLwesine ukuthi bayaqhubeka nokwenza inqubekela phambili ekuxazululeni amacala asezweni lonke alethwe ngabantu abathi iMoonanto's Roundup ibenze baba nomdlavuza.
Ekulalelweni kwevidiyo, ummeli weBayer uWilliam Hoffman utshele iJaji Lesifunda lase-US uVince Chhabria ukuthi inkampani ifinyelele kwizivumelwano - noma isizofinyelela kwizivumelwano - ukuxazulula amacala angaphezu kuka-3,000 XNUMX aqoqelwe enkantolo yamacala amaningi (MDL) afakwe eNkantolo yesiFunda yase-US isifunda esiseNyakatho yeCalifornia.
Le nkampani ngokwehlukana isivele ixazulule izinkulungwane zamacala angaphandle kwe-MDL, amacala abelokhu eqhubeka ezinkantolo zombuso. Kodwa impikiswano nokuphikisana kuye kwaphazamisa ukunikezwa kokukhokhelwa ngokuphelele, ngezinsolo ezivela kumafemu abanye abamangali okuthi iBayer ibuyise izivumelwano ezifinyelelwe ezinyangeni ezedlule, kanti amafemu abanye abamangali angafuni ukuvumelana nalokho abakubheka njengokungeneli okwenziwe yiBayer.
Akukho obekuxoxwa ngakho ngalezo zikhalazo, nokho, ekulalelweni kwangoLwesine, izinhlangothi zombili ziveza imibono ethembayo.
“Inkampani iqhubekele phambili yaphothula izivumelwano eziningana namafemu…. sethemba nokuthi sizophothula ezinye izivumelwano ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, ”kusho uHoffman etshela ijaji.
“Lapho sikhona njengamanje… lezi zibalo zilinganiselwe ngandlela thile kodwa ngicabanga ukuthi zisondele ngokufanelekile: Kunamacala angaba ngu-1,750 angaphansi kwezivumelwano eziphakathi kwenkampani nezinkampani zabameli namanye amacala abalelwa ku-1,850 kuya ku-1,900 asezigabeni ezahlukahlukene zengxoxo njengamanje, ”kusho uHoffman. "Sisebenzela ukwenza uhlelo lokusheshisa izingxoxo futhi ngethemba lokuthi sizoletha izivumelwano nalawo mafemu."
Ummeli wabamangali uBrent Wisner utshele ijaji ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kusele “amacala ambalwa” ngaphakathi kwe-MDL angakaxazululwa kuze kube manje. Kodwa, uthe - "Silindele ukuthi bazoba khona maduze."
IJaji uChhabria uthe ngokwenqubekela phambili uzoqhubeka nokuhlala kwamacala eRoundup kuze kube nguNovemba 2 kodwa uzoqala ukuhambisa amacala enkantolo uma engaxazululwa yilelo phuzu.
Ukusebenza Okubi kweBayer Kusolwa Ngokuthi
Ithoni yokubambisana evezwe ekulalelweni kwangoLwesine ibikude kakhulu nokulalelwa okwenziwe ngenyanga edlule lapho ummeli wabamangali u-Aimee Wagstaff utshele iJaji uChhabria ukuthi iBayer ibingahloniphi izivumelwano zokuhlala okwenziwe okwesikhashana ezenziwe ngoMashi futhi bezihlose ukuphothulwa ngoJulayi.
IBayer yamemezela ngoJuni ukuthi ifinyelele esivumelwaneni samaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi namafemu abameli baseMelika ukuxazulula iningi lezicelo zomdlavuza weRoundup ezingaphezu kuka-10. Kodwa ngaleso sikhathi amafemu abameli abaphambili kuphela ababehola amacala ayenezivumelwano zokugcina ezazisayinwe neBayer kwakunguMiller Firm neWeitz & Luxenburg.
Isivumelwano seMiller Firm sisodwa sifike ku- $ 849 wezigidi ukumboza izimangalo zamakhasimende angaphezu kuka-5,000 XNUMX Roundup, ngokusho kwemibhalo yezokukhokha.
Ezinze eCalifornia Baum Hedlund Aristei & Goldman Inkampani yezomthetho; i Andrus Wagstaff iqinile evela eColorado; kanye ne- Moore Law Group YaseKentucky yayinezivumelwano zokuzama kodwa hhayi izivumelwano zokugcina.
Ngokwencwadi ebhalwe nguWagstaff efakwe enkantolo, uBayer ucele ukwelulwa kaninginingi kuze kube yilapho isivumelwano nenkampani yakhe sihluleka maphakathi no-Agasti. Ngemuva kokubika izindaba kuJaji Chhabria, izingxoxo zokuxazulula izinkinga zaqala futhi zaba ekugcineni ixazululwe ngamafemu amathathu kulenyanga.
Imininingwane ethile lokuthi izindawo zokuhlala izophathwa zifakwe ekuqaleni kwaleli sonto enkantolo eMissouri. IGarretson Resolution Group, Inc., eyenza ibhizinisi njenge-Epiq Mass Tort, izosebenza njenge-
"Umlawuli Wokuxazululwa Kwamanga, ” ngokwesibonelo, kumakhasimende ka-Andrus Wagstaff amadola akhe okuzokhokha azodinga ukuthi asetshenziswe ngokwengxenye noma ephelele ukubuyisa izindleko zokwelashwa komdlavuza ezikhokhwe yi-Medicare.
IBayer ibisabise ngokuthi izofaka izicelo zokuqothuka uma kungatholakali indawo yokuhlala yonke, ngokusho kwezokuxhumana kusukela kumafemu wabamangali kuya kumakhasimende abo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, Bayer, California, umdlavuza, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, icala, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, ukuhlala, umbulali wokhula
IGlyphosate embizeni yenkukhu esetshenziswa njengomanyolo ilimaza ukukhiqizwa kokudla, abacwaningi bathi
Posted on September 9, 2020 by UCarey Gillam
Ososayensi baveze izindaba ezimbi kakhulu maqondana ne-herbicide glyphosate, esaziwa kangcono njenge-Roundup, ephepheni elisha locwaningo elishicilelwe kule nyanga.
Abaphenyi abavela eNyuvesi yaseTurku eFinland kuvezwe ephepheni eshicilelwe encwadini Isayensi Yendawo Ephelele lowo manyolo ovela enkukhu esetshenziswa njengomanyolo unganciphisa isivuno sezitshalo lapho umquba uqukethe izinsalela zemithi yokubulala ukhula esekwe ku-glyphosate, njenge-Roundup. Umanyolo wenzelwe ukwandisa ukukhiqizwa kwezitshalo, ngakho-ke ubufakazi bokuthi izinsalela ze-glyphosate zingaba nomphumela ophambene bubalulekile.
Imfucumfucu yenkukhu, njengoba umquba ubizwa kanjalo, uvame ukusetshenziswa njengomanyolo, kufaka phakathi ezolimo eziphilayo, ngoba kubhekwa njengokucebile ngezakhamzimba ezibalulekile. Ukusetshenziswa kukadoti wenkukhu njengoba umanyolo ubulokhu ukhula kokubili ekulimeni nasekulimeni nasezingadini zasekhaya.
Ngenkathi ukusetshenziswa kukhula, “izingozi ezingaba khona ezihambisana nokuqongelelwa kwemithi emqubeni wezinkukhu zisazitshwa kakhulu,” kuxwayisa abacwaningi baseFinland.
Abalimi be-organic bebelokhu bekhula bekhathazeka ngokwengeziwe ngemikhondo ye-glyphosate kumanyolo womquba ovunyelwe ekukhiqizeni okuphilayo, kepha abaningi embonini bayanqikaza ukwazisa ngalolu daba.
Abalimi bafafaza i-glyphosate ngqo ezitshalweni eziningi ezitshalwe emhlabeni wonke, kufaka phakathi ubhontshisi, ummbila, ukotini, i-canola nezinye izitshalo ezakhiwe ngofuzo ukumelana nokwelashwa kwe-glyphosate. Zivamise futhi ukufafaza ngqo izitshalo ezinjengokolweni nama-oats, ezingakhiqiwe izakhi zofuzo - ngaphambi nje kokuvuna ukomisa izitshalo.
Njengoba kunikezwe inani lama-herbicides asuselwa ku-glyphosate asetshenziselwa ukwelapha izitshalo ezisetshenziswa ekudleni kwezilwane, kanye nenani lomquba osetshenziswe njengomanyolo, "kufanele sazi nakanjani ukuthi lolu hlobo lwengozi lukhona," kusho omunye wabalobi yokufunda, u-Anne Muola.
"Akekho obonakala ezimisele kakhulu ukukhuluma kakhulu ngakho." UMuola uqaphele.
Ukusetshenziswa okunzima kwe-glyphosate herbicides ngqo ezitshalweni zokudla kukhuthazwe yiMonsanto - manje eyiyunithi yeBayer AG - kusukela ngawo-1990, kanti ukusetshenziswa kwe-glyphosate kutholakala yonke indawo kangangokuba izinsalela zitholakala kakhulu emasampulini okudla, amanzi ngisho nomoya.
Ngenxa yokuthi kunezinsalela ze-glyphosate ekudleni kwabantu nezilwane, amazinga we-glyphosate atholakala ngokuvamile atholakala emqubeni womuntu nomquba wezilwane.
Lezi zinsalela ze-glyphosate kumanyolo ziyinkinga yabalimi ngezizathu eziningi, ngokusho kwabaphenyi baseFinland.
"Sithole ukuthi umquba wezinkukhu ungathola izinsalela eziphakeme ze- (glyphosate-based herbicides), wehlise ukukhula kwezitshalo nokuzala, futhi ngaleyo ndlela uvimbele imiphumela ekhuthaza ukukhula komquba lapho usetshenziswa njengomanyolo," kusho leli phepha. "Le miphumela ikhombisa ukuthi izinsalela zidlula enqubeni yokugaya izinyoni, futhi okubaluleke kakhulu, ziyaqhubeka zikumanyolo womquba isikhathi eside."
Abaphenyi bathi izinsalela ze-glyphosate zingaqhubeka ezinhlelweni zemvelo, zithinte izinto eziningana ezingezona okubhekiswe kuzo eminyakeni eminingi.
Imiphumela, bathi ifaka phakathi ukwehla kokusebenza komquba njengomanyolo; ukungcola okuhlala isikhathi eside okususelwa ku-glyphosate-based herbicide kwemijikelezo yezolimo; Ukungcoliswa “okungalawulwa” kwe-glyphosate yezindawo ezingabhekiwe; ukwanda kosongo "ezintweni ezisengozini ezingezona okubhekiswe kuzo," kanye nengozi eyengeziwe yokuphikiswa okuvela ku-glyphosate.
Abaphenyi bathi kufanele kwenziwe ezinye izifundo ukudalula ubukhulu bokungcola kwe-glyphosate kumanyolo wezinto eziphilayo nokuthi lokho kukuthinta kanjani ukusimama.
Ucwaningo lwaseFinland lunezela ebufakazini bezingozi zezinsalela ze-glyphosate kumanyolo, ngokusho kochwepheshe bezolimo.
"Imithelela yensalela ye-glyphosate eye yaqoqelwa ezindle zezinkukhu yindawo enganakwa kakhulu yocwaningo," kusho usosayensi wenhlabathi waseRodale Institute, uDkt. Yichao Rui. “Kodwa ucwaningo olukhona lukhombisile ukuthi lezo zinsalela zingaba nomthelela omubi ezitshalweni, uma umquba wezinkukhu ubusetshenziswa njengomanyolo. Izinsalela zeGlyphosate kumanyolo zikhonjisiwe ukuthi zinemiphumela engemihle ezitshalweni, kuma-microbiomes omhlabathi, nakwamagciwane ahambisana nezitshalo nezilwane kufaka phakathi abantu ngohlu lokudla. Lapho lokhu kungcola kusakazwa kungahloswanga ngomanyolo, kubangela ubunzima obukhulu emisebenzini nasezinsizakalweni zezinto eziphilayo. ”
Emhlabeni jikelele amathani ayizigidi eziyi-9.4 ye-glyphosate kufuthwe emasimini - okwanele ukufafaza cishe isigamu sephawundi leRoundup kuwo wonke amahektare alinyiwe emhlabeni.
Ngo-2015, i-World Health Organization's International Agency for Research on Cancer (IARC) i-glyphosate ehlukanisiwe njengo-mhlawumbe i-carcinogenic kubantu”Ngemuva kokubukeza iminyaka yocwaningo lwesayensi olushicilelwe nolubuyekezwa ontanga. Ithimba lososayensi bamazwe omhlaba lithole ukuthi kukhona ukuhlangana okuthile phakathi kwe-glyphosate ne-non-Hodgkin lymphoma.
Amashumi ezinkulungwane zabantu e-United States abaphethwe yi-non-Hodgkin lymphoma umangalele uMonsanto, nasezivivinyweni ezintathu ezigcinwe kuze kube yimanje, amajaji atholile ukuthi i-glyphosate herbicides yenkampani bekufanele isolwe ngokudala umdlavuza.
Ngokwengeziwe, i ukuhlanganiswa kwezifundo zezilwane kukhishwe kuleli hlobo kukhombisa ukuthi ukuvezwa kwe-glyphosate kunomthelela ezithweni zokuzala futhi kungasongela ukuzala, kungeze nobufakazi obusha bokuthi umenzeli wokubulala ukhula angaba ukuphazamiseka kwe-endocrine. Amakhemikhali aphazamisa i-Endocrine angalingisa noma aphazamise amahomoni omzimba futhi axhumene nezinkinga zokukhula nokuzala kanye nokungasebenzi kahle kobuchopho namasosha omzimba.
izibulala-zinambuzane, Ukukhangisa ezolimo, Bayer, izinkukhu, izitshalo, ukulima, umanyolo, Finland, Ukudla, izingadi, ukulima, udoti, umquba, Monsanto, eziphilayo, izitshalo, izinkukhu, ucwaningo, isayensi